कर्णाली जिप दुर्घटनामा बेपत्ता भएकाको पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार
शनिबार, जेठ १७, २०७७
सुर्खेत- गत मंगलबार हुम्लामा भएको जिप दुर्घटनामा परी वेपत्ताहरुको पुत्ला बनाएर आज (बिहीबार) अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको छ।
घटना भएको तेस्रो दिनसम्म पनि गोताखोरको टोलीले समेत वेपत्ताको कुनै पत्ता लगाउन नसकेपछि हिन्दु संस्कारअनुसार कुशको पुत्ला बनाएर नौं जनाको दाहसंस्कार गरिएको हो।
वेपत्ता भएकामध्ये चार जनाको सामूहिक अन्त्यष्टि गरिएको छ। आफन्तहरुले हिन्दु परम्पराअनुसार कुश र परालको पुत्ला बनाएर अन्त्येष्टि गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रहरी निरिक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले जनाकारी दिए।
प्रहरीका अनुसार खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिन्दु हमाल, नन्दादेवि सिंह, बसन्ती शाही र गोकुल सुनारको एउटै चितामा अन्त्येष्टि गरिएको हो। यस्तै चन्द्र हमाल, जिप चालक मणि शाही, नैनसिंह भण्डारी, बसन्ती शाही, कौरा दमाई र उनको २ वर्षीया छोराको भने छुट्टाछुट्टै अन्त्येष्टि गरिएको छ।
यसैबिच घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गाउँपालिकाले १३ दिनसम्म कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलका अनुसार बेपत्ताहरुका परिवारलाई गाउँपालिकाले जनही दश÷दश हजार क्रिया खर्च सहयोग गर्ने भएको छ।
अध्यक्ष रावलका अनुसार १३ औंं दिनको पुण्य तिथिको अवशरमा असार १५ गते पालिकाका शोक सभा गर्ने र सबै विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयलाई सार्वजनिक विदा दिने समेत निर्णय गरिएको छ।
वेपत्ताहरुको खोजीका लागि विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतको कमान्डमा हिजो गोताखोर टोलीले घटनास्थल पुगेको थियो।
टोलीले वेपत्ता जीप र यात्रुको अवस्था पत्ता लगाउन सकेपछि फर्किने तयारी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरिक्षक सिंहले जानकारी दिए। गोताखोर टोलीले घटना स्थलको दुई किलो मिटर दूरीसम्म खोजी कार्य गरेको थियो।
गत मंगलबार (असार ३ गते) खार्पुबाट याङ्चु जाँदै गरेको लु १ ज ७१६६ नम्बरको बोलेरो जीप बेडु बिसाउनी र कैल्याबालुमा यात्रुसहित कर्णालीमा बेपत्ता भएका छ।
9783, House No: 138
फोन : +977-1-4782240
इमेल : info@nepalsamaya.com,
८५८ - २०७५/७६
प्रबन्ध निर्देशक: तरुणप्रताप शाह
सम्पादकीय निर्देशक: मुमाराम खनाल
सम्पादक: सञ्‍जीव शर्मा
© Nepal Samaya Pvt.Ltd. - 2020. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP